Job 7 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
7 “Ọ̀ bụ na mmadụ efu enweghị ọrụ a manyere+ ya ịrụ n’elu ụwa, Ọ̀ bụ na ụbọchị ya adịghịkwa ka ụbọchị onye ọrụ e goro ego?+ 2 Dị ka ohu, ọ na-agụsi ya agụụ ike inwe ndò,+ Dịkwa ka onye ọrụ e goro ego, ọ na-echere ụgwọ ọrụ ya.+ 3 Otú ahụ ka e si mee ka m nwee ọnwa+ ndị na-abaghị uru, Ha ekenyewokwa m abalị ndị jupụtara ná nsogbu.+ 4 Mgbe m dinara ala, ekwuru m, sị, ‘Olee mgbe m ga-ebili?’+ Mgbe chi jiri, obi anaghị ezu m ike ma ọlị ruo n’isi ụtụtụ. 5 Ikpuru+ na ọkpụrụkpụ ájá+ ekpuchiwo ahụ́ m; Akpụkpọ ahụ́ m akpọwo nkụ wee na-agbarisị.+ 6 Ụbọchị ndụ m na-agabiga ọsọ ọsọ+ karịa osisi nke onye na-ekwe ákwà, Ọ na-agwụkwa n’enweghị olileanya.+ 7 Cheta na ndụ m bụ ifufe;+ Na anya m agaghị ahụ ihe ọma ọzọ. 8 Anya onye na-ahụ m agakwaghị ahụ m; Ị ga-eji anya na-achọ m, ma agaghị m anọ ya.+ 9 Ígwé ojii na-ekusa wee ghara ịdị; Otú ahụ ka onye na-agbada na Shiol na-agaghị agbagote.+ 10 Ọ gaghị alaghachi ọzọ n’ụlọ ya, Ebe obibi ya agakwaghị amata onye ọ bụ.+ 11 Mụ onwe m kwa agaghị emechi ọnụ m. M ga-ekwu okwu n’ihi ahụhụ m na-ata; M ga-ekwu okwu banyere nchegbu m n’ihi ihe na-ewute mkpụrụ obi m!+ 12 Àbụ m oké osimiri ka m̀ bụ nnukwu anụ mmiri, Nke na ị ga na-eche m nche?+ 13 Mgbe m sịrị, ‘Ihe ndina m ga-akasi m obi, Ihe ndina m ga-enyere m aka buru nchegbu m,’ 14 I jiriwo nrọ menye m ụjọ, I jiriwokwa ọhụụ mee ka m tụwa ụjọ, 15 Mkpụrụ obi m wee họrọ mpịgbu, Họrọkwa ọnwụ+ kama ịhụ ọkpụkpụ m ndị a. 16 Ajụwo m ya;+ agaghị m adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Hapụ m, n’ihi na ụbọchị ndụ m bụ ume e kupụrụ ekupụ.+ 17 Gịnị ka mmadụ efu bụ+ nke na ị na-azụlite ya, Na ị na-etinye obi gị n’ebe ọ nọ, 18 Na ị na-elekọta ya kwa ụtụtụ, Na-anwale ya n’oge ọ bụla?+ 19 Gịnị mere na ị gaghị ewepụ anya gị n’ebe m nọ,+ Ma ọ bụkwanụ hapụ m ka m loo ọnụ mmiri? 20 Ọ bụrụ na mụ emehiewo, olee ihe m ga-emeli gị, gị Onye na-ahụ ụmụ mmadụ?+ Gịnị mere i ji lekwasị m anya, m wee ghọọrọ gị ibu arọ? 21 Gịnịkwa mere na ị gaghị agbaghara njehie m,+ Legharakwa mmejọ m anya? N’ihi na ugbu a, m gaara edina n’ájá;+ Ị ga-achọkwa m, ma agaghị m anọ ya.”